Umgangatho wabaQalayo | Ukupheka kweKhitshi
UHana mitchell | | idelicatessen
Sukuyifumana netshizi ngeli xesha leholide! Namhlanje ndikuzisele ingcebiso yokuba undwendwele itafile yakho oku IKrismesi ngaphandle kokukushiya isiqingatha somvuzo kwilinge lakho. Oku fondue yabaqalayo NguGrail oyiNgcwele wabathandi beshizi kunye nabaphengululi be-cuisine yokutya. Ngokunokwenzeka ukuba le yenye yeendlela zokupheka eziya ngqo kwi Iindlela zokupheka ze-TOP10 ukujonga njengoThixo.
Zininzi iindlela zokulungiselela i-fondue, kodwa ndigqibe kwelokuba ndiqhubeke nokwenza utoliko lokuba uNacho uyenza njani, umlungiseleli kwenye yeendawo endizithandayo eMadrid, I-crêpperie La Rue (c / ikholon). Ukuba ungumzingeli wokutya-ubuhle, ndincoma i-100% (zombini ubuhle, i-fondue kunye ne-Nacho). 💜💛💜
Landela inyathelo ngenyathelo lokutya okumnandi kwaye uyonwabele kancinci.
Musa ukukunika ngeeshizi! Funda ngokwakho ukuba ungayenza njani le fondue yabaqalayo kwaye ubothuse abo basekhaya. Kunconywe kakhulu la maqela
Uhlobo lweRipeipe: Ukuqala
I-250g i-Emmenthal ushizi, igalelwe
I-250g yeGruyere cheese, igalelwe
Iipuniwe ezili-2 ze-cornstarch
1 igalikhi yegalikhi, usike kwisiqingatha
250cc yewayini emhlophe eyomileyo
1 isonka seepagés
Okokuqala, ngoncedo lwemela, sikhupha iimvuthuluka zesonka ngokuzoba isangqa ngaphezulu, sisuse isiciko kwaye sisuse iimvuthuluka zezonka ngoncedo lweminwe yethu. Sidibanisa itshizi kunye ne-cornstarch kwisitya.
Sinqumle i-clove yegalikhi kwisiqingatha kwaye sihlambe ezantsi kwembiza apho siza kulungiselela khona ifondue.
Ithela iwayini embizeni kunye nobushushu phakathi kobushushu obuphakathi.
Xa iwayini iqala ukubila, ngokuthe ngcembe sidibanisa umxube wamasi. Sishukumisa ngesipuni somthi ngohlobo lwesibhozo (oku kubaluleke kakhulu).
Xa siphumelele intlama efanayo ngaphandle kwamaqhuma, songeza ityuwa kunye nepepile ukungcamla kwaye kongeze inutmeg encinci.
Sigalela imixholo embizeni kwisitya sesonka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » idelicatessen » I-Fondue yabaqalayo
Iimbotyi eziluhlaza kunye ne-broccoli zivusa i-fry
Iichickpeas ezinamakhowa, ichard kunye nepaprika